ရောင်းရန်သေးငယ်တဲ့မြက် Chopper စက် ,မွေးမြူရေးအတွက်အစာကျွေးခြင်း
အသေးစားမြက်ရိတ်စက်သည်အဆင့်မြင့်မန်းဂနိစ်စတီးများနှင့် ၂.၇ မီလီမီတာထင်သည့်သံမဏိပြားများကိုအသုံးပြုသည် ,ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော forage ဖြတ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်။ durable.forage ဖြတ်စက်သည်ကြက်ဘဲအစာအတွက်သေးငယ်သောအရွယ်အစားအထိမြက်ကိုခုတ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။, မြက် chopper စက်မြက်ပင်များနှင့်ကောက်ရိုးအမျိုးမျိုး process နိုင်ပါတယ်အဖြစ်ကတစ် ဦး ချင်းစီလယ်သမားများအတွက်အကောင်းတစ် ဦး အထောက်အကူဖြစ်ခြင်းရဲ့.
အသေးစားမြက်ရိတ်စက်သည်တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောစက်ဖြစ်သည်။ မြက်ရိတ်စက်သည်မြက်ပင်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်, ဆေးရွက်ကြီး, ဂျုံကောက်ရိုး, ပြောင်းဖူးအညှာ, ချိုသောအာလူးပင်စည်, ချစ်သူ, ကောက်ပဲသီးနှံများကိုကျက်စားရန်အတွက်ကျက်စားသောဂျုံစပါးပင်များကိုအသုံးပြုသည်,သိုး,ဆိတ်သငယ်,သမင်နှင့်မြင်းစသည်တို့ကိုအသေးစားမြက်ခွဲစက်ကိုစက္ကူလုပ်ရန်ဖြတ်ထားသောသစ်ပင်ငယ်လေးများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သိုလှောင်ခြင်းဖြတ်တောက်သောစက်သည်နို့ထွက်ထွက်ရှိမှုစွမ်းရည်ပိုမိုများပြားစေပြီးအစာကျွေးမှုကိုလျော့ချပေးနိုင်သည်။, ကြာရှည်ခံပြီးအနိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
အသေးစားမြက် Chopper စက်၏အားသာချက်
2.မော်တာပါဝါရွေးချယ်မှုသုံးမျိုး,လျှပ်စစ်မော်တာ, ဒီဇယ်အင်ဂျင်,ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ကဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် forage ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်ကိုလျှပ်စစ်မီးမပြည့်စုံသောဒေသတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်,ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစက်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်.
5.ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ဤသေးငယ်တဲ့မြက် Chopper စက်အပေါ်မှာယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်.
forage ဖြတ်စက်၏နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameter
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ)
(r / m)
အသေးစားမြက် Chopper စက်ဗီဒီယိုအလုပ်လုပ်